Mareykanka hakad geliyey shaqada safaaradda uu ku leeyahay Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
19th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Waaxda Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa si kumeel-gaar ah u xirtey safaaraddii ay ku lahayd dalka Jabuuti, iyadoo arrintaas sabab loo dhigay halis laga cabsi qabo, The Hill ayaa sidaas qoray.
“Si joogto ah ayaan u helnaa warbixino, waxaan go’aaminey in warbixinda aan heleyno baarno, isla markaana aan sugno amniga, kadib hanjabadaaha la helaayo” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan Arrimaha Dibadda ee Maraykanka.
Safaaradda Maraykanka ee Jabuuti ayaa xirnaan doonto Khamiista ilamaa iyo Axadda soo socota.
Bishii Juun 2014 ayey ahayd markii laba qof oo ka tirsan al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Maqaaxi ay inta badan fariisan jireen dadka caddaanka ah iyo ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan dalka jabuuti, Maqaaxida La Chaumiere.
Labadii qof ee weerarka fuliyey ayaa Jabuuti ka soo galay dhanka Somaliland, waxaana weerarkaas ku dhintey dad ka badan 20 qof.
Bishii Feberaayo 2015 dhamaadkeedi ayaa dalka Jabuuti mar kale xireen xadka ay la wadaaagaan Soomaaliya ee laga maamulo Hargeysa.
Website-ka safaarasdda Maraykanka ee dalka Jabuuti ayaa digniin u dirtey dhamaan dadka Maraykanka ah ee ku sugan Jabuuti in ay qaadaan tallaabooyin ay isku ilaalinayaan.
Todobaadkii hore waxaa labo maalmood hakad la geliyey shaqada qunsuliyadda Mareykanku ku leeyahay magaalooyinka Jeddah, Riyadh iyo Dehran ee dalka Sacuudi Carabiya.
Ciidamo ka socda AMISOM oo la filayo iney berri tagaan Cadaado